Laos iyo Bangiga Horumarinta Aasiya oo bilaabay mashruuc cusub oo kaabayaasha dalxiiska |
Location: Bogga ugu weyn » Soo dirida » Newsletter » Laos iyo Bangiga Horumarinta Aasiya oo bilaabay mashruuc kaabayaal dalxiis oo cusub
Laos iyo Bangiga Horumarinta Aasiya oo bilaabay mashruuc kaabayaal dalxiis oo cusub
VIENTIANE, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Dadka Lao - Bangiga Horumarinta Aasiya (ADB) iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Dadka Lao waxay bilaabeen mashruuc kaabayaal dalxiis oo sidoo kale gacan ka geysan doona aasaasidda pr
VIENTIANE, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Dadka Lao - Bangiga Horumarinta Aasiya (ADB) iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Dadka Lao ayaa bilaabay mashruuca kaabayaasha dalxiiska kaas oo sidoo kale gacan ka geysan doona dhisidda Ururada Maareynta Maareynta Heer Gobol iyo heer qaran (DMOs).
Daah-furka aqoon-is-weydaarsiga Kaabayaasha Dalxiiska ee Subregion Subregion ee Mashruuca Kobaca loo wada dhan yahay — oo ah mashruucii saddexaad ee dalxiiska ee ADB ay ka taageerto waaxda dalxiiska ee dalka—waxaa ka soo qayb galay Lao PDR Wasaaradda Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska Wasiir ku xigeenka Lao PDR Chaleune Warinthrasak iyo ADB Portfolio Sare Khabiirka Maamulka Steven Schipani, oo ay weheliyaan saraakiisha kale ee dawladda iyo gobolka.
Deynta mashruuca ee $40 milyan ee ADB waxaa lagu beegsan doonaa cusboonaysiinta kaabayaasha dalxiiska, oo ay ku jiraan hagaajinta waddooyinka ee loo baahan yahay si loo helo marin wanaagsan iyo isku xirka suuqyada maxalliga ah ee afar gobol -Champasak, Khammouane, Luang Prabang, iyo Oudomxay. Gobolladan waxaa loo doortay sababtoo ah goobaha istiraatiijiga ah ee ku teedsan wadooyin hoosaadka Greater Mekong. Dawladdu waxay mashruucan ku bixinaysaa lacag dhan 3.6 milyan oo dollar, taasoo socon doonta 2015 ilaa 2019.
Xoojinta kaabayaasha dalxiisku waxay sidoo kale siin doontaa dhiirigelin hindisaha DMO, kaas oo ujeedadiisu tahay in la abuuro shabakado taageero dalxiis oo ay la socdaan wakiillo ka socda wasaaradaha dawladda, ururada ganacsiga ee socdaalka la xiriira, iyo hay'adaha horumarinta/deeq-bixiyeyaasha. Hadafka ayaa ah in la abuuro oo la fuliyo istaraatijiyado suuq-geyneed oo la isku dubariday iyo xayaysiis waxqabadyo iyo dhacdooyin.
"DMO's waxay noqon kartaa gole wanaagsan oo la isugu keeno daneeyayaasha dalxiiska si ay u wadaagaan aqoonta ku saabsan hababka wanaagsan iyo xoojinta iskaashiga suuq-geynta iyo horumarinta alaabta," ayuu yiri Mr. Schipani.
Mr. Warinthrasak wuxuu xusay in samaynta DMO's "ay kobcin doonto wada shaqayn dhow oo dhexmarta qaybaha dadweynaha iyo kuwa gaarka ah iyo la-hawlgalayaasha horumarinta caalamiga ah si loo horumariyo Lao PDR oo ah goob dalxiis oo caan ah."
Mashruucan cusub ee dalxiiska waxa ka mid ah 13.8 milyan oo dollar oo lagu hagaajinayo godka Chom-Ong ee Oudomxay, iyadoo la casriyeeyay jidka soo gala 54 kilomitir (km), xarumaha macluumaadka iyo soo dhawaynta, dukaamada, iftiiminta godka, baarkin leh jaranjaro godka laga galo. , calaamadaha, iyo goobaha dalxiiska.
Luang Prabang, $7.25 milyan ayaa loo qoondeeyay in lagu horumariyo jidka 10 km ka soo gala Route 13 ilaa Pak-Ou Village iyo godadkeeda caanka ah, iyadoo la sii marayo Ban Xang Hai. Waddadan ayaa sidoo kale lagu xiri doonaa beeraleyda deegaanka iyo kuwa wax soo saara ee farsamada gacanta iyo magaalada.
Terminalka Ferry River ee Luang Prabang's Mekong River ee Degmada Chomhet Heritage wuxuu sidoo kale heli doonaa 3 milyan oo doolar oo casriyeyn ah, oo ay ku jirto xarun macluumaad, waddo marineed oo la hagaajiyay, iyo tas-hiilaadka raaxada dalxiiska.
Xang Cave, oo dhowr kiiloomitir u jirta waqooyiga Thakaek ee wareegga "Loop" ee Gobolka Khammouane, ayaa ka faa'iidaysan doona waddo 4 km ah iyo buundada, iftiinka godka, iyo soo dhawayn iyo xarun macluumaad, oo ku kacaysa ku dhawaad ​​$2.5 milyan.
Saraakiisha afarta gobol ayaa sameeyay tabobarro kooban si ay u abuuraan liisaska xubnaha DMO iyo waxqabadyada suurtagalka ah.
Comic-Con waxay daaha ka qaadaysaa martida soo socota ee bandhigga xagaaga
Dalxiiska Yurub wuxuu ku dhamaaday si xoog leh wuxuuna bilaabay gariir
Heathrow si loo dhammeeyo waajibaadka waji-xidhka 16-ka Maarso
Daawaynta Cusub ee Afka loo Oggolaaday ee Ulcerative Firfircoon
In ka badan 5 milyan oo reer Kanada ah ayaa degay 2021
Daawaynta Cusub ee Fibrosis Beerka
Air Canada waxay ballan-qaadday inay luuqadaha rasmiga ah ku...
Dhulka Loo Jaray Dib U cusboonaysiinta Barxadda Devon...